एमालेको उम्मेदवार भएपछि स्कूल पढ्दाको अनुशासन सम्झिन थालेको छु
Sunday,3Sep, 2017 4:55 AM
बसरुद्दिन अन्सारी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा बीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमालेको मेयर उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पहिले कांग्रेस, त्यसपछि माओवादीमा सक्रिय भई अहिले एमाले प्रवेश गरी उहाँ महानगरको मेयर उम्मेदवार बन्नुभएको हो । नेशनल मेडिकल कलेजको सञ्चालक समेत रहेका अन्सारीसँग उहाँको चुनावी राजनीतिबारे चक्रपथ डटकमले गरेको कुराकानीः
बीरगञ्ज महानगरमा तपार्इं नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एमालेमा प्रवेससँगसँगै टिकट पाउनुभयो । जित्ने आधार के हुन्, कस्तो छ तयारी ?
जित्ने वहुत आधारहरु छन् । सवभन्दा पहिला त म यहाँ एमालेप्रति जनताको रेस्पोन्स देखेर यो पार्टीमा प्रवेश गरेँ । बहुत लामो समयसम्म एमालेलाई मधेस विरोधी पार्टी भनेर हल्ला चलाइयो । मलाई फिल भयो कि मधेसका लागि सबैभन्दा धेरै काम गर्नेलाई किन मधेस विरोधी भनियो ? अहिले सब जनताले हेरिसके, देखिसके, एक्च्युयलमा एमाले मधेश बिरोधी होइन, यो मधेसलाई बनाउने पार्टी हो । अहिले सबैलाई फिल भइसक्यो । एमालेले जित्यो भने बीरगञ्जको जुन दुर्दशा त्यो कम हुन्छ ।
यहाँका भुक्तभोगी जनताले हेरिसके, कसले नारा बेचेको छ र कसले विकासको कार्यक्रम लिएर आएको छ । अब कसलाई जिताउने भन्ने पनि यहाँका जनताले थाहा पाइसके । एमाले यहाँ सतप्रतिशत बिजय हुन गईरहेको छ । यो पब्लिक डिमाण्ड हो । हामीले यहाँ मतदाताबीच सर्वे पनि गर्यौं, सर्वेले पनि त्यही भन्छ बीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमालेले जित्छ । एमालेका केन्द्रीय नेताहरु आउँदा यहाँका सर्वसाधारणले कसरी हात उठाएर स्वागत गरे, तपाईंहरुले देख्नु पनि भएको होला । अव यो मधेशलाई विकास गराउनका लागि र अगाडि बढाउनका लागि एमालेलाई जिताउनु पर्ने हुन्छ । जताले जिताउछन् र जिताएर देखाउछन् ।
तपाईं पहिला माओवादीबाट संविधानसभा सदस्यका लागि पनि चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो । अहिले एमालेका तर्फबाट लड्दैहुनुहुन्छ । पार्टी फेरेर उम्मेदवार बन्नु राम्रो भयो त ?
पार्टी फेर्नु पर्ने आवश्यकता त्यो पार्टीले लिएको नीतिले हुन्छ । मैले किन पार्टी फेरेँ भन्दा पनि अहिले जनताले किन पार्टी फेरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । पहिले एमालेलाई मधेस विरोधी भन्नेहरु पनि धमाधम पार्टी फेर्दै एमालेमा लाग्न थालेका छन् । मैले एमाले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सर्वे गरेँ, जनता एमालेतिर आकर्षित भइरहेका छन् । जनताले नै एमाले चाहन्छन् भने म किन एमालेमा प्रवेश नगर्ने ? त्यसैले म एमालेमा प्रवेश भएँ । अनि यो के नराम्रो भयो ? म हिजो माओवादीबाट उम्मेदवार बनेँ, माओवादीमा सक्रिय रहनु भएका साथीहरु नै अहिले धमाधम एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ । यहाँ त के माओवादी, के कांग्रेस, के फोरम सबका सब पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता विकास गर्ने हो भने एमाले चाहिन्छ भन्न थालिसकेका छन् । उनीहरुले नै हो मलाई तपाईं एमालेबाट खडा हुनुस् भने । अव यहाँका मतदाताको रुची अनुसार नै एमालेले जित्छ ।
तपाईलाई एमालेले किन रोज्यो र तपाईले किन एमाले रोज्नुभयो ?
मलाई लाग्छ एमालेले मलाई एक कारणले मात्र रोज्यो कि यो वीरगञ्ज बनाउने एमालेको चाहनाको यहाँ कसले नेतृत्व गर्न सक्छ ? त्यो उसले हेर्यो जस्तो मलाई लाग्छ । अव कुनै पनि पाटी सर्भाइव गर्नका लागि जनतालाई झुठा आश्वासन दिने, फकाई फुल्याई गर्ने, एउटा चुनाव जित्ने, अर्काे चुनावमा जे होला भन्ने समय यो होइन । बीरगञ्जमा म अगाडि सरेँ भने यहाँको विकास गर्ने एमालेको चाहना सफल हुन्छ भन्ने उसले सोच्योहोला । त्यसैले मलाई एमालेले रोज्यो भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले चाहिँ किन एमालेलाई अप्रोच गर्नुभयो ?
मैले दुई–तीन कारणले एमाले रोजेँ । एउटा त के छ भने म पहिला कांग्रेस थिएँ, त्यसपछि माओवादीमा पनि गएँ । अहिले एमालेमा प्रवेश गर्दा मैले दुई–तीनवटा कुरा हेरेँ, जुन मलाई मन पर्यो । पहिलो यो क्याडरबेस पार्टी हो । दोस्रो एमालेमा बहुत डिसिप्लेन छ । अर्काे यो पार्टीसँग विकास गर्नु पर्छ, अवको राजनीति विकासबाट निर्देशित हुनु पर्छ भन्ने एमालेले सोचेको पाएँ । मैले अरु पार्टी पनि हेरेँ, नाम त नलिउँ, त्यहाँ मिटिङ नै हुँदैनथ्यो । न सिस्टम न डिसिप्लेन । अब एमालेमा आएपछि मलाई पनि बोल्न गाह्रो छ, किनभने एमालेमा बसेर त जे पायो त्यही गर्न पाईंदैन । के हो नीति, के हो लक्ष्य, के हो विकासको कार्यक्रम र योजना त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । पार्टीले जे भन्छ त्यो लयमा बोल्ने गर्नुपर्छ । म त अहिले बोर्डिङ भर्ना हुँदाको डिसिप्लेन सम्झिरहेको छु । यसरी हिंड्ने, यसरी बोल्ने, यस्तो काम गर्ने, यस्तो काम नगर्ने एमालेले मलाई डिसिप्लेनमा राख्न खोजेको छ । कार्यकर्ता मात्र होइन, नेताहरु पनि सिस्टमले चल्ने पार्टी एमाले रैछ ।
तपाईं त ब्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । मेडिकल कलेज चलाउनुहुन्छ, जो विवादित बनेको छ । यसले तपाईंको उम्मेदवारीलाई अप्ठेरो परेको छैन ? तपाईंको उम्मेदवारीलाई लिएर कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
मेडिकल कलेज विवादित हुनु भन्दा पनि विवादित बनाइएको छ । त्यो मेडिकल कलेजमा म पनि संलग्न भएकाले विवादित बनाइयो । नियम अनुसार निवेदन दिएपछि सरकारले स्वीकृति दिन्छ, बेकारमा विवादित चाहिँ मलाई बनाइयो । बीरगञ्ज महानगरको मेयरमा मेरो उम्मेदवारीसँग यसलाई जोड्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । मैले केही गैरकानुनी काम गरेको छैन । राजनीतिमा हिजो कांग्रेसमा पनि लागेँ, माओवादीमा पनि लागेँ, अहिले एमालेमा छु । अहिले नै चाहिँ यो विषयलाई किन विवादको विषय बनाउनु पर्ने ?
अर्काेकुरा मेरो उम्मेदवारीले विभिन्न व्यवसाय गर्ने उद्यमी ब्यवसायीहरु पनि उत्साहित छन् । उद्यमी हुनु ब्यवसायी हुन अव राजनीतिको आधारभूत विषय हो । बिना उद्यम प्रगति हुँदैन । कसैले उद्यम गर्यो कि गैरकानुनी बाटोबाट अकुत कमायो भन्ने चाहिँ खोज्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा उद्यम र ब्यवसाय सबैभन्दा बढी धरासयी छ । म यहाँ उम्मेदवार हुने कुराले ती ब्यवसायी साथीहरु पनि उत्साहि छन् । उद्योग ब्यवसायलाई राजनीति गर्ने विषय बनाउनु छ, त्यसको विरोध गरेर क्षणिक लाभ उठाउनु छ भने त बेग्लै कुरा नत्र राजनीतिमा लाग्नु बदमासी होइन । तपाईंलाई म एकएक उदाहरण दिन सक्छु जनतालाई दुःख दिएर उद्योग, कलकारखाना बजार बन्द गर्छन् तिनै राजनीतिज्ञले डिजल पेट्रोल मट्टितेल ग्यास आफैंले सप्लाई गर्छन् र यसलाई कमाईखाने भाँडो बनाउँछन् । यो बेइमानी हो नि । म समाजका लागि राजनीति पनि गर्छु र आफ्ना लागि आफैं उद्यमी पनि बन्छु भन्ने कुरा त राम्रो हो नि ।
म यति चाहिँ भन्छु, म मेयर भएपछि यहाँ बिग्रेको अर्थतन्त्र सवल बनाउन मैले ठूलो काम गर्नुछ । त्यसमा एमालेको विकासको नीतिले नेतृत्व गर्छ । मैले आफूलाई लागेको मनोमानी गर्ने कुरा पनि होइन । आर्थिक क्षेत्रको विकास र समृद्ध नगरका लागि सामुहिक दृष्टिकोण अघि सार्छाैं । यो ब्यापारिक नगरी बीरगञ्जलाई कसरी आर्थिक हिसावले सवल बनाउने, व्यापार जगतलाई कसरी संरक्षण गर्ने, यो मेरो जिम्मेवारी हो । मैले यसको प्लानिङ पनि गरिसकेको छु । सबै प्लानिङ उहाँहरुसँग बसेर नै गरिसकेको छु कि व्यापार कसरी गर्दा फल्छ फुल्छ, अब हामीले के कुरालाई टार्जेट गर्ने, यहाँबाट हामी निर्यात कसरी गर्ने ? यस्ता धेरै विषयमा छलफल गरेको छु । यहाँ शान्ति, रुल रेगुलेसन त्यो हामी पूरा गर्छौं हामीले एउटा फ्रि जोनको अवधारण ल्याएका छौं, जो उद्योगी व्यापारी र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरसँग सम्बन्धित छ । जो निर्यातमा र एक्सपोर्टमा बढि ध्यान दिन्छन् उनीहरुलाई त्यसमा ठाउँ दिन्छौं र त्यसलाई सेफ ग्यारेन्टी गर्छाैं । यसको सेफ्टी र सेक्युरिटी दिन्छु, एकदिन पनि उद्योग बन्द भयो भने त्यसको जरिवाना पनि दिन हामी तयार हुन्छौं । हाम्रो देशमा डलर कसरी भित्र्याउने, हामीसँग धेरै छ गर्न सक्ने कुरा । यो भन्दा अगाडि गलैंचा उद्योगकै रुपमा थियो, गार्मेन्ट थियो, जुन बाहिर निर्यात हुन्थ्यो । मेडिकल नै भन्नुहुन्छ भने यो मेडिकल एजुकेसनको मेन ठाउँ हो । यसलाई हब बनाउन पाए त्यो चाहीँ बीरगञ्जको सौन्दर्य र आम्दानी दुवै हुन्छ ।
तपाईं त अहिले नै मेयर जितिसकेको जस्तो कुरा पो गर्नुहुन्छ ?
तपाईंलाई कस्तो लागेको छ मलाई थाहा छैन । म चुनावी अभियानमा हिंडिरहेको छु र जे फिल गरिरहेको छु । त्यस आधारमा मैले आफ्नो आत्मविश्वास तपाईंसामु शेयर गरेको हुँ । म जित्छु होइन, जितिसकेको छु । कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया त पूरा गर्नु पर्यो नि होइन ? हामी त्यसैको पर्खाइमा छौं ।